Asina kujeka Bhuku Kuongorora
Runaway Kind naAnthony Brandt
Isu tinonyura mune chakavanzika chikuru chekushanduka kwevanhu, prodigy yaive chokwadi chekusiyanisa. Hatitauri zvakanyanya nezvehungwaru asi nezvekugadzira. Nehungwaru, proto-murume aigona kunzwisisa kuti moto waive chii kubva pamhedzisiro yekusvika pairi. Ndatenda nekusika...
Kubva Mukati, naMartin Amis
Mabhuku senzira yehupenyu dzimwe nguva anoputika nebasa rinomira pachikumbaridzo cherondedzero, chisingaperi uye biographical. Uye izvo zvinopedzisira zvave kuita kwechokwadi kwemunyori anosanganisa kurudziro, kusimudzira, ndangariro, zviitiko ... Zvatinopihwa naMartín Amis mu ...
Sacramento, naAntonio Soler
Kuti matanda anokwezva ndeye dictation yefizikisi. Tabva ipapo mai vezvese zvedu kupesana. Izvo zvinzvimbo zvakanyanyisa mumunhu zvinoguma zvabatana nekunzwa kusingamisikike kwemagnetism kana inertia. Zvakanaka nezvakaipa zvinofumura zvinyorwa zvavo zvemisimboti uye miyedzo nezvese ...
Inventory yeZvimwe Zvinhu Zvakarasika, Judith Schalansky
Hakuchina mamwe paradhiso kupfuura vakarasika, sekutaura kwaJohn Milton. Kana zvinhu zvinokosha kupfuura izvo zvausina, uye haugoni kuzvichengeta. Izvo zvinoshamisa zvepanyika zvino zvakawanda izvo zvatinopedzisira tarasikirwa kana kuparadza pane izvo zvingangogadzirwa nhasi zvakadaro, zvichiwedzera ...
The Art of War Between Companies, naDavid Brown
Sun Tzu akanyora bhuku rake "The Art of War" kumashure muzana ramakore rechi XNUMX BC. Hondo zhinji gare gare, uye kubva muzana ramakore reXNUMX kusvika nhasi, kupokana kutsva kwekushandisa kwakanaka kana kwakashata hunyanzvi kunopokana pakati pemarudzi akawanda kana makambani ehurumende. Isu tobva taenderera mberi kune art ye ...
Iyo Yakakura Mwenje, naMaria Konnikova
Munyori asati ave mutambi we poker, María Konnikova akauya kumutambo wemitambo yemakadhi kubva mukuda kwemurondedzeri wese anoda kusvika kune imwe nhauro nyowani kuti anyorove mamiriro acho. Isu tinowedzera kune iyo nyaya yake doctorate mune psychology uye isu tinowana yakagozha vhezheni yePelayo ...
PaNguva neMvura, naAndri Snaer Magnason
Kuti zvakakosha kuti utarisane neimwe nzira yekugara pasi rino, hapana mubvunzo. Kupfuura kwedu nepasirese kunoonekwa nezviratidzo sezviratidzo zvekuti ivo havana kukosha kana tikatarisa kuenzana kwenguva yedu nemuchadenga. Saka isingakoshi uye inokwanisa kwazvo kushandura zvese. Pasi richapona kwatiri uye tichava ...
Peji1 Peji2 ... Peji19 Zvadaro →